Foto vidiyo nke onye na-agba egwu Brenton Tarrant (ndụ iyi) Christchurch New Zealand: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 16 March 2019	• 14 Comments
Foto vidio nke Brenton Tarrant na-agba ụta ga-eme site na mmiri iyi n'oge ọgụ na alakụba dị na Christchurch New Zealand, dị ịrịba ama (lee vidiyo n'okpuru). Achọrọ m igosi ha ebe a ka i wee nwee ike ịmepụta onwe gị banyere eziokwu nke ọgụ a. Na m ihe aga aga Egosiri m ihe pụtara na ọ bụ itinye ihe ndị dị otú ahụ na-arụ. Ihe nkiri vidio na-egosi na ọ dịghị ebe a ga-ahụ. Onye na-agba ụta nwekwara ike ịbanye n'ọdụ ụgbọ oloko n'ekwughị onye ọ bụla na-atụ egwu. O doro anya na o nweghị mkpu ọ bụla na ụlọ alakụba, ebe ị ga-atụ anya ka ndị mmadụ gbaa ọsọ.
N'ezie, a ga-egwu anyị site na ihe oyiyi na akụkọ banyere ndị ikwu na-adị ndụ site na mgbasa ozi, ma ọ bụrụ na ị maara usoro iji mee profaịlụ dị omimi, ọbụnakwa vidiyo na foto ndị dị na ya gụnyere otu netwọk mmekọrịta, mgbe ahụ, anyị nwere ike ịdị na nche. na okwukwe na-enweghị isi na ihe oyiyi egosipụtara. Site na ngwa ugwo azu, pụtara ngwanrọ na usoro nwere ọgụgụ isi (AI), ọ dị mfe ịmepụta ndị anaghị adị adị na adịgboroja ọ bụla achọrọ. Ọbụna ị nwere ike ịme onye ọ bụla ọnụ ma ọ bụrụ na enweghi ike ịdị adị (adịgboroja adịgboroja) nwere ike iji ya dị ka ihe ngebichi ozugbo ma ọ dịghị onye ga-ahụ na ọ bụ adịgboroja. (lee vidio n'okpuru ebe a ma gaa n'ihu na-agụ n'okpuru ebe a)
Ya mere, anyi amaghị ma Brenton Tarrant dị. Ịmepụta ihu igwe dị omimi, dịka ọmụmaatụ NVDIA software, mgbe ahụ ị nwere ike mfe ịdebe vidiyo zuru oke na ụzọ nwata. Naanị ihe ị chọrọ bụ nchikota ụfọdụ ngwanrọ na usoro greenscreen a. N'ezie, anyị ga-ahụ ihe oyiyi nke ikpe ikpe na anyị ga-ejikwa obi ike hụ ekwentị ma ọ bụ foto nchebe nchebe, ma anyị enweghị ike iche na ihe ọ bụla vidio ma ọ bụ ihe ndekọ vidiyo nwere ike ịlele maka eziokwu. Nke a bụ ihe gbasara ntụkwasị obi na maka nke ahụ, gọọmentị chọrọ ka anyị tụkwasị 'akwụkwọ akụkọ' akụkọ ahụ anya, ma mgbe ahụ ị ghaghị ịtụkwasị onye na-egbu anụ ahụ anya nke na-enyocha anụ ya. Onye na-egbu anụ nke na-enyocha anụ ya ga-anakwere ya na, ma ọ dịkarịa anya, ọ dị oke nkpa maka ịtụkwasị obi. (lee vidio n'okpuru ebe a ma gaa n'ihu na-agụ n'okpuru ebe a)
Otu okwu dị mma nke onye na-agụ ebe a na saịtị ahụ bụ ihe ndị a:
Otú ọ dị, ihe na-eju m anya bụ oge dị n'agbata égbè abụọ ahụ. Anụrụ m 11 nkeji na 7 nkeji. Ebe dị anya bụ igwe 6 dị otú ahụ, ma ọ bụrụ na ị ga-esi n'ime ụlọ alakụba mbụ banye n'ụsọ a (na-adọba ụgbọ ala ma na-aga ụlọ alakụba ọzọ) bụ oge zuru ezu?
N'ihi na m bi n'ebe a onwe m, achọrọ m ịga n'ụzọ taa. N'ụzọ dị mwute, a na-emechi ọtụtụ ụzọ gburugburu ụlọ alakụba nke akpa égbè. Ka o sina dị, achọrọ m ịnwale ọzọ n'izu ahụ iji hụ ma elee 6 kilomita a ga-ekpuchi n'ime minit 7 (n'ehihie Friday).
Chee echiche banyere ya n'onwe gị. Ihu igwe ga-ama Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta nwere ike igwu egwuregwu? N'ọnọdụ ọ bụla, agbapụ a na-etinye aka n'ịkpalite ìgwè dị iche iche megide ibe ha. Onye Senator Australia Fraser Anning ebubo Muslim mbata na-adịghị anya mgbe agbapụ. Ya mere, mkpokọta ndị na-agbakwụnye na nkwụsị yiri ka ọ dị mgbagwoju anya nke nwere ike ịkpalite mmegide ahụ, nke mere na ọ dị ugbu a (lee m ihe aga aga). Nke a bụ Hegelian dialectics, ebe edemede na mgbochi na-eduga ná njikọ. Ya mere, ịchọrọ ka ị gbakwunye na obere ogwe iji meepụta ihe dị na batrị. N'ụzọ dị otú a, a na-agba mgbagwoju anya n'etiti ọha mmadụ anya ka ọ ghọọ nnukwu gbakwunyere ma mee ka mkpịsị osisi ghara ịdị. Enwere ike ime nke a site na arụmụka uche (PsyOps). Na-ekpechitere onwe gị.
Ọ bụrụ na ehichapụ vidiyo n'okpuru, pịa na njikọ a.
Ihe ngosi vidio: http://all4alarp.com/watch/nz-shooting-hoax-analyzed_ayu2Ir99IzTgJrG.html
Ihe ndekọ njikọ njikọ: theguardian.com
Nnyocha na-egosi na NOS na ndị uweojii nwere ike ịme akaebe ụgha na otu onye nwere ike isi kwuo ụgha
Ọ dị ntakịrị mfe ịkọ ọdịnihu ma ọ bụrụ na ị na-ahụ site na edemede: ghọọ Nostradamus
Tags: foto, Brenton, Christchurch New, agba, footage, Fraser Anning, -ebi, ụlọ alakụba, égbè, smokee's, stream, Ntughari, video, Zeeland
16 March 2019 na 20: 22
Achọghị m ozugbo na mgbe m hụrụ ihe oyiyi ndị mbụ, ma na-eleghachi anya oge ọzọ, achọpụtara m na omume a dịtụtụghị maka ndị mmadụ. Ihe m chọpụtara dị iche bụ na mgbe mbido mbụ, ìgwè mmadụ ka nọdụrụ ọnụ na ụlọ alakụba. Ọfọn, ọ nwere ike ịkwa jijiji. Ma o nyere onye ọ bụla ọkụ ọkụ na njedebe. N'elu ihe omuma a, enwere otutu ndi lanariri na enweghi ike ihuta oghere. Enwere ike isite na ihe ntaneti ojoo. Ma ọ bụ ihe ijuanya na n'ezie yiri ụgha ọkọlọtọ!
17 March 2019 na 10: 33
Nnyocha ahụ dị ịrịba ama.
Enyere m vidiyo a (ehichapụ vidiyo) na Vimeo.com N'okpuru sekọnd ole na ole ehichapụla akaụntụ m.
17 March 2019 na 16: 09
17 March 2019 na 21: 22
O doro anya na enwere m nnọọ anya site na QAnon intro na vidiyo a jikọtara ya n'ihi na, n'echiche m, QAnon bụkwa onye a na-achịkwa uche, nke a ga-ejikọta na ọdịda nke ụda na dollar.
16 March 2019 na 21: 15
Eva Gabeler na-ekwu okwu na otu nnukwu mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi na okooko osisi Dutch ndị dị na azụ na dịka nwa agbọghọ na-edekọ akwụkwọ kwesịrị ịgwa onye na-ede akụkọ Telegraaf banyere ihe arụ na nke a na-enwetụbeghị ụdị ya, ụdị ụdị ndị Eve na-ahụ? ị chere .. na anyị ahụbeghị. Eva yiri ka ọ bụ ezigbo nwanyị na-eme ihe nkiri, ya na egwu ya adịghị egosi na ọ nwere obi ụtọ.
Egwuru egwu n'egwuregwu ndị na-eme egwuregwu na-ele anya ka ọ dịkwuo njọ. Ị ghọtaghị n'ihi na ihe niile nwere ike ime maka ya
ha niile dị ntakịrị karịa ka a ga-ahụkwa ha.
Ma n'ezie ị nwere ọdụm ọdụm ndị na-eme ihe nkiri,
16 March 2019 na 23: 33
Ndi maara (ma eleghị anya) emeghi (ha nwere ike ikwu na o doro anya na ọ bụghị ezigbo). Onu ogugu ndi mmadu na vidio adighi n'usoro na onu ogugu ndi mmadu, na emeghi, 100 kwesiri inwe ya. Ọzọkwa, ma eleghị anya ka ọkachamara ngwá agha na-ekwu banyere ihe ngwá agha ndị ahụ na-emekarị.
Ma eleghị anya New Zealand, n'ihi na ọ bụ otu n'ime mba ikpeazụ ebe ị na-atụ anya ka ihe dị otú ahụ. Naanị ọnwa ole na ole. Ọ bụrụ na ọ na-eme n'ebe ahụ, ọ nwere ike ime ebe ọ bụla.
16 March 2019 na 23: 48
Ụnyaahụ na taa m gbalịrị iru ala alakụba. Otú ọ dị, a na-emechi okporo ụzọ dị iche iche site n'akụkụ dịgasị iche iche n'ihi okporo ụzọ (ọ bụ ndagwurugwu efu ugbu a). Kwesịrị ịgbalị ọzọ n'ime izu ole na ole.
17 March 2019 na 02: 12
Jide nke a maka oge:
Akwụkwọ akụkọ ahụ na-akọ na onye agha ahụ na-agbapụ agbapụ maka oge 17.
Stuff na-ekwu na Carl Pomare onye njikwa maka Naki Hụ Ọrụ Ọrụ bụ otu n'ime ndị mbụ nọ na ọnọdụ. Ọ na-ebugharị na ụlọ alakụba banyere 1.40pm ma hụ ọtụtụ mmadụ na-agba ọsọ. Ọ nụ ka ọkụ na-agbapụ na ọkụ ọkụ na ndị mmadụ na-eti ala.
The Herald na-akuko onye agha nke abụọ hụrụ na nso ụlọ Mosque nke Linwood. TV3's Newshub na-ekwu na ndị gbara akaebe na-ahụ ka otu gunman na-agbaba n'ime ụlọ alakụba ahụ.
Ya mere, na gburugburu 1.40, a malitere na ụlọ alakụba mbụ ahụ ebe a na-ebi ndụ nke 17 nkeji. Ya mere, onye na-agba ụta ga-achụga ụlọ alakụba nke abụọ ahụ tupu oge 2. Kedu oge a na-akọ banyere égbè nke abụọ?
17 March 2019 na 02: 36
Ndị uweojii kwuru na e nwere égbè nke abụọ na Mosque Masjid Linwood.
Mark Nichols gwara New Zealand Herald na ọ nụrụ banyere égbè ise na n'elekere ekpere Friday ahụ weghachite ọkụ na égbè ma ọ bụ bọmbụ.
Mr Nichols kwuru na ọ hụrụ na mmadụ abụọ nwere mmerụ ahụ na-ebugharị n'ọdụ ụgbọ mmiri dabara na ụlọ ahịa ụgbọala ya nakwa na ha abụọ dịka ndụ.
Ọzọkwa onye akaebe nke ụlọ alakụba nke abụọ.
"Anyị batara n'ime 10 nkeji ekpere anyị, mgbe ahụ, anyị nụrụ egbe égbè n'èzí, ma nọgide na-ekpe ekpere. Oge ọzọ, ọ bụ n'ime. Ọ bụ onye na-acha ọcha akpụkpọ anụ na ọ malitere na-agha ọkụ na anyị niile wee maka cover.
ya mere mgbe mbụ mbugharị vidiyo mepụtara ihe onwunwe nke 17 nkeji ma malite ron 1.40 - 1.45 (enwere 15 nkeji oge tupu ekpere amalite) na nkeji 10 nke abụọ mgbe emechara ekpere ahụ ka onye gbaa agba ga-enwe Sun 10 nkeji iji si na A ruo B.
dịkwa iche na n'ime ọkara otu elekere, e nweghi ihe ọ bụla e mere iji hụ alakụba ndị ọzọ (enwere ike iche)
17 March 2019 na 10: 51
17 March 2019 na 12: 52
17 March 2019 na 13: 43
Ọ bụ ya mere akaụntụ ahụ dị egwu na m mechibidoro ha ruo ọtụtụ afọ n'ime sekọnd ole na ole ... pụọ vidiyo.
Nyocha! Geroge Orwell ...
17 March 2019 na 17: 07
George Orwell = ndị a na-enyo enyo
1 April 2019 na 20: 11
N'okpuru njikọ ahụ
Ozugbo enwere ike ịnweta ozi, ị nwere ike ijide n'aka na ị na-abụ abụ.
Ọ dịghị onye ọ bụla echebela site na ijide eziokwu ahụ. Nke a bụ ọchịchị rụrụ arụ.
" 49 gburu na mwakpo ala abụọ na Christchurch New Zealand
Ntụle Brenton Harrison na-emegide ọgụ nke mgbochi na-emegide Turkey? »
Nleta nile: 11.614.218